Tsy eo amin’ny seranan-tsambon’i Mahajanga ny toeram-piasan’ny mpanao ratsy, araka ny fampitam-baovaon’ny mpiara-mihira tamin’ity zanaky ny faritra Sabotsy Namehana ity izay nisy naka avy nianatra ny alatsinainy heriny hariva, 17 jona 2019, tamin’ny 5 ora sy sasany teo. Voalazan’ny lasibatra tamin’ireo indray mihira taminy mantsy fa tsy teo amin’ny seranan-tsambon’ny Renivohitra Boina izany. Mbola nandeha lavitra izy vao nahita mpitandro filaminana, raha niala ilay sisin-dranomasina izay saika hanondranan’ireo azy, ny alakamisy 20 jona maraina teo. Araka ny famakafakan’ireo mpiray fiangonana azy ireo, mihevitra ireto farany fa eo am-panamarinana ny ivontoeram-panondranana olona an-tsokosoko ny mpitandro filaminana izay manatanteraka ny fanadihadiana ary ny famotorana. Araka ny loharanom-baovao tamin’ny fanadihadiana lalina hatrany, tsy olona iray no miasa amin’izany. Ankoatra ireo mpisambotra sy mpitondra ireo babo dia efa misy mpandray sy mpanamarina tahaka ilay nijery ny ativavan’ity mpianatry ny teknika ao amin’ny taona faharoa ity. Araka ny angom-baovao hatrany, malina amin’ny fampitam-baovao ireo fianakaviana ka tsy dia ahitana vaovao mipika loatra ny antsipirihany, indrindra ny fomba nisamborana sy nitondrana ity tovolahy very ka hita indray ity.